Global Voices teny Malagasy » Balkana, Rosia: Voasambotra i Radovan Karadžić · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Mey 2018 5:13 GMT 1	 · Mpanoratra Veronica Khokhlova Nandika Miranah
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Bosnia Herzegovina, Kroasia, Rosia, Serbia, Slovenia, Ady & Fifandirana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Araka ny tatitra , voasambotra tao Serbia tamin'ny alin'ny Alatsinainy ny lehiben'ny Serba Bosniana teo aloha sady anisan'ny gadra nitsoaka karohana indrindra manerantany Radovan Karadžić .
Ireto ambany ireto ny fanehoan-kevitra voalohany avy amin'ireo bilaogera:
Eric Gordy ao amin'ny East Ethnia :
Mazava ho azy fa vaovao lehibe ny fisamborana an'i Karadžić, ka olona ahiahiana goavana roa sisa (izay tsy maintsy samborina ny iray) mila samborina sy tsaraina.
Tsy tokony hanakorontana izany ny fitsarana satria ny valala tsy indroa mandry am-bavahady. […]
Pengovsky ao amin'ny Sleeping With Pengovsky:
[…] Nohamafisin'ny biraon'ny filohan'i Serbia, Boris Tadić ny vaovao momba ny fisamborana, saingy tsy nanome mikasika ny antsipiriany izy. Azoko an-tsaina fa lalao mampidi-doza ho an'ny fitarihana Serba izao satria manana mpanohana ao Serbia sy ao amin'ny repoblikan'i Srbska ao Bosnia-Herzégovina i Karadžić sy ny jeneraly Ratko Mladić (izay mbola miriaria). Antenaina fa ho tafavoaka tsara kokoa tsy tahaka an'i Zoran Djindjić efa maty ny filoha Serba Boris Tadić.
Angamba, angamba fotsiny, hifarana ihany ny ady ao Yogoslavia. […]
[Avy amin'ny takelaka fanehoan-kevitra, fanamarihana hafa avy amin'i Pengovsky]
Taorian'ny adiny roa nikarohana fanehoan-kevitra, toa nanjaka ny fahamalinana. Tsy misy olona te hanana fanantenana be loatra.
Douglas Muir avy ao amin'ny A Fistful of Euros :
[…] Tamin'ny fanamarihana manokana: nandritra ny taona maro, nilaza ny vadiko fa nonina «teny an-tsisin-dalana» teny aminay i Karadzic tamin'ny fanombohan'ny taona 2000. Nonina teny an-dalana Golsfortieva (teny Serba manondro ny “Galsworthy”) ao amin'ny faritra Vracar ao afovoan'i Belgrad izahay tamin'izany fotoana izany. Nahafantatra izany tamin'ny resadresaka tamin'ny manodidina ny vadiko, ary tahaka ny vazivazy mahazatra ao an-trano nandritra ny dimy taona izany. “Eo ambanin'ny lalana misy aminay fotsiny!” “Eny, eny tokoa, eny, malala. Na inona na inona, okay.
Eny, farafaharatsiny, nilaza ny fampahalalam-baovao fa nisy ny fisamborana … tao amin'ny faritra Vracar, ao afovoan'i Belgrade. Lohateny: Vadin'ilay bilaogera “tena afa-po” tamin'ny fisamborana.
Na izany aza. Mety mandalo tsy misy vaovao firy ny andro iray na roa, satria araka ny lalàna Serba, manan-jo hanohitra ny lafiny sasany amin'ny fisamborana azy ny voampanga- indrindra indrindra, raha izy na tsia ilay olona voakasika.
Mbola: vaovao tsara, raha marina.
Balkan Ghost ao amin'ny Finding Karadzic :
[…] Toerana tsara kokoa noho ny omaly ny androany eo amin'izao tontolo izao. Matetika reraka noho ny tsy rariny sy ny tsimatimanota izay vokatra farany amin'ny fitondran-tena ratsy indrindra manerantany ataon'ny olona ratsy indrindra eto amin'izao eo amin'izao isika izay liana amin'ny fitsarana jiolahy iraisam-pirenena .
Saingy tsy ankehitriny, hanomboka ny fitsarana an'i Radovan Karadzic izay hahitana azy hiatrika ny fiampangana azy amin'ny fitarihana vono olona faobe sy famonoana niniana natao tamin'ireo Silamo an'arivony tao Bosnia teo anelanelan'ny taona 1992 sy 1995.
Sarah Franco ao amin'ny Cafe Turco :
[…] Vao avy nandao an'i Belgrade aho ary nisy tokoa ny fanantenana. Nisy ny zavatra niova. Mora ny milaza izany ankehitriny, eny tokoa, saingy mahafantatra ireo izay mahafantatra ahy manokana fa izany no fahatsapako. Saingy tamin'ny fotoana nialako, niresaka momba ny mety hanatrarana an'i Mladic tsy ho ela ny tenako sy i Jelena, saingy tsy nisy nieritreritra izahay fa ho voasambotra koa i Karadzic. Toa esoeso fa nahazo fahefana ny SPS mba hitrangan'izany, saingy misy dikany. Mpihatsaravelatsihy izy ireo, fa tsy tena mpino, ary tafavoaka amin'ny sakana rehetra eo amin'ny tanjony izy ireo. Ankehitriny, Mladic sy Karadic no sakana … Indrisy ho azy ireo.
Amin'izao fotoana izao indrindra, eo am-piresahana amin'ny namako avy ao Belgrade amin'ny finday aho. Mijery vaovao ao amin'ny fahitalavitra izy ary miandry ny fivoarana farany aho. Mahazo hafatra SMS hatraiza hatraiza ny namako, tsy mampino ny hafalian'ny olona, ary ankehitriny, tsy maintsy mandeha matory aho satria marobe ny asa miandry ahy, saingy ahoana no ahafahana matory amin'ny fientanentanana be tahaka izao?
Shaina ao amin'ny Bosnia Vault :
No doubt it will contain the good doctor's poetry . […]
[…] Fanontaniana miverimberina: manontany tena aho hoe hafiriana no andrasana hivoahan'ny tranonkala “avotsory i Radovan”?
Tsy isalasalana fa hahitana ny tononkalon’  ny dokotera mahafinaritra izany. […]
Toa efa miasa amin'izany sahady ireo bilaogera Rosiana sasany.
Mpisera LJ monina ao Moskoa grenzlos (Arthur Medvedev) nandefa tononkalo roa avy amin'i Karadžić , nandika tamin'ny teny Rosiana.
Mpisera LJ log2stas nanoratra izao  :
…] Tsy maninona ny haben'ny mahajiolahy mpamono olona an'ady azy eo imason'ny Vondrona Eoropeana, niady ho an'ny fireneny izy… [Mpihatsaravelatsihy] ny fitarihana Serba.
Amin'ny ankapobeny, leson-tantara mahaliana izany. Mitsilany eo amin'ny rindrin'i Kremlin i Lenina, izay namono Rosiana an-tapitrisany ary mikarakara matso miaramila eo akaikin'ny fasany ny firenena.
Nampiditra ny firenena tanaty trosa i Piera ilay goavana, izay namadika ny tambanivohitra ho mamolava, ary nanamboatra tanàna an-tseranana ambonin'ny taolan'olombelona – olo-malaza lehibe ara-panjakana izy.
Sampin'ny mpiserasera i Stalina, izay nandefa Rosiana am-polony tapitrisa tany amin'ny toby fampivondronana [fanagadrana goavana].
Ny filoha Bush, jiolahy an'ady, mpikarakara fampijaliana any am-ponja, meloka tamin'ny fampiasana fitaovam-piadiana shimika voaràra nandritra ny fanafihana an'i Falloujah – hanjono mangina mandritra ny fisotroany ronono izy.
Tsy nisy nigadra na dia ny iray tamin'izy ireo aza, tsy nisy voasazy tamin'ny fomba hafa tamin'ny zavatra vitan'izy ireo.
Hiatrika fitsarana i Radovan Karadžić ary hotsaraina … satria niaro ny fireneny.
Etsy andaniny, nofantsihana tamin'ny hazo fijaliana ihany koa Jesosy. […]
Pikantsary tao amin'ny tranonkalan'ny Interpol . Avy amin'ny loharanom-baovao iray ihany ny pikantsary ao amin'ity lahatsoratra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/05/118986/
 Eric Gordy ao amin'ny East Ethnia: http://eastethnia.blogspot.com/2008/07/initial-observations.html
 Douglas Muir avy ao amin'ny A Fistful of Euros: http://fistfulofeuros.net/afoe/history/karadzic-arrested/
 Balkan Ghost ao amin'ny Finding Karadzic: http://findingkaradzic.blogspot.com/2008/07/we-got-him.html
 Sarah Franco ao amin'ny Cafe Turco: http://cafeturco.wordpress.com/2008/07/21/karadzic-arrested/
 Shaina ao amin'ny Bosnia Vault: http://bavault.blogspot.com/2008/07/dr-ks-wild-ride.html
 tononkalo roa avy amin'i Karadžić: http://grenzlos.livejournal.com/149030.html
 nanoratra izao: http://log2stas.livejournal.com/421654.html
 tranonkalan'ny Interpol: http://www.interpol.com/public/data/wanted/notices/data/1995/47/1995_47747.asp